ရင်ဖိုဖွယ် အရှိတ်အကောက်လေးတွေနဲ့ အတွင်းသားအလှတွေ ထင်ရှားနေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ – Real Link
ရင်ဖိုဖွယ် အရှိတ်အကောက်လေးတွေနဲ့ အတွင်းသားအလှတွေ ထင်ရှားနေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
ချစ် ပရိသတ်ကြီး ရေ ရှင်ယွန်းမြ တ် ကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာ ရရှိထား တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ သူမ ကတော့ မြင်သူတကာ ငေးမောလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို ရယူ ထားထား သူလေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်စ် နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အား ပြင်းတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် က အခုလည်း ပုရိသ တွေ ကြွေကျ သွားအောင် ပုံစံတစ်မျိုး နဲ့ ဖမ်းစားလိုက် ပြန်ပါ တယ်..။
ဒီနေ့မှာ လည်း အသားကပ် ဝတ်စုံလေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို “ကျမ က အားနွဲ့သူ မိန်းမသားမို့ နွဲ့ဆိုးဆိုးပြီး. အသဲယားရင် သုံးချက် ထိုး တယ် (👊🏻👊🏻👊🏻 မိန်း ခလေး သဘာဝ စိတ်ဆိုးပြီ ဆိုရင် တော့ငါးချက် ထိုးတတ် တယ် (👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻)ကျမ ဆိုး တဲ့ နွဲ့တဲ့ဒဏ် ခံနိုင် မှ ကျမ ဘဝထဲ ဝင် လာခဲ့ပါ….နော်😜(အားနွဲ့သူလေး)”ဆို တဲ့ Capt io nေ လးနဲ့အ တူ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါ တယ်…။
ပုံလေးထဲ မှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိ ရှိ နဲ့ အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင် မိအောင် အပြတ်လန်း နေတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ဖက်ရှင် ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ် တွေ ကြိုက်နှစ်သက် ကြမှာ အမှန် ပဲဖြစ်ပါ တယ်..။ ကဲ..ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ ပုံလေး ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်..။နေ ာက်ရက်တွေ မှာ လည်း အသစ်အသစ်လေး တွေ ထပ်မံ တင်ဆက် ပေးဦးမှာ ဖြစ် လို့ Page လေးကို like &Follow လေးလု ပ်ခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့ နော်…☺။
ခ်စ္ ပရိသတ္ႀကီး ေရ ရွင္ယြန္းျမတ္ ကေတာ့ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္ အမာ ရရွိထား တဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ သူမ ကေတာ့ ျမင္သူတကာ ေငးေမာေလာက္ တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြ ေၾကာ င့္ ပုရိသေတြ ရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို ရယူ ထားထား သူေလးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ခပ္မိုက္မိုက္ စ တိုင္စ္ နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ အားျပင္းတဲ့ ရွင္ယြန္းျမတ္ က အခုလည္း ပုရိသ ေတြ ေႂကြက် သြားေအာင္ ပုံစံတစ္မ်ိဳး နဲ႔ ဖမ္းစားလိုက္ ျပန္ပါ တယ္..။
ဒီေန႔မွာ လည္း အသားကပ္ ဝတ္စုံေလး နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို “က်မ က အားႏြဲ႕သူ မိန္းမသားမို႔ ႏြဲ႕ဆို းဆိုးၿပီး. အသဲယားရင္ သုံးခ်က္ ထိုး တယ္ (👊🏻👊🏻👊🏻 မိန္း ခေလးသဘာဝ စိတ္ဆိုးၿပီ ဆိုရင္ ေတာ့ငါးခ်က္ ထိုးတတ္ တယ္ (👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻)က်မ ဆိုး တဲ့ ႏြဲ႕တဲ့ဒဏ္ ခံနိုင္ မွ က်မ ဘဝထဲ ဝင္ လာခဲ့ပါ….ေနာ္😜(အားႏြဲ႕သူေလး)”ဆို တဲ့ Capt ionေ လးနဲ႔အ တူ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါ တယ္…။
ပုံေလးထဲ မွာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိ ရွိ နဲ႔ အခါခါ ျပန္ၾကည့္ခ်င္ မိေအာင္ အျပတ္လန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။ရွင္ယြန္းျမတ္ ရဲ့ဖက္ရွင္ ပုံေလးေတြ ကို ၾကည့္ၿပီး ပရိသတ္ ေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကမွာ အမွန္ ပဲျဖစ္ပါ တယ္..။ ကဲ..ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ရွင္ယြန္းျမတ္ ရဲ့ ပုံေလး ကို မၽွေဝေပးလိုက္ပါ တယ္..။ေနာက္ရက္ေတြ မွာ လည္း အသစ္အသစ္ေလး ေတြ ထပ္မံ တင္ဆက္ ေပးဦးမွာ ျဖစ္ လို႔ Page ေလးကို like &Follow ေလးလု ပ္ခဲ့ဖို႔ မေမ့နဲ႔ ေနာ္…☺။
Previous post မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားတွေကို ပုရိသတွေစီ ဝေမျှလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင်
Next post တင်းကိတ်လှတဲ့ ရွှေရင်မွှာအစုံလိုက်ရဲ့ အလှတရားကို ရင်ဖိုအောင် ချပြလိုက်တဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ TIK TOK လေး